Qabsoon Oromoo Damee Baayyifachuu Qabdi.
Qabsoon Oromoo amma bifa tokko qofa qabattee jirtu tun damee tooftaa qabsichaa baayyifachuu qabdi. Damee tooftaa baayyifachuu qabdi yoon jedhu immoo tan akka gargar diigamuu dhaabilee qabsoo Oromoo kana jechuu kiyyaa miti, hubadhaa! Yeroo ammaa qabsoon teenya‪#‎Oromoprotests‬ qofa irratti daangooytee jirtu tun roga hundaan damee jajjabduu biqilchuun dahoo wayyaaneen mataa jalatti qabattu, Oromiyaa keessaa bakka itti sasuu maltu mara cirree barbadeessuun guyyaa aaraa godaansisuu qabna.
Qabsoon amma ilmaan Oromoo taasisaa jiran geengoo ‪#‎Oromoprotest‬qofatti marsitee jirti. Tooftaan kun bu'aalee jijjiiramaa baayyee buusaa jiraattullee garuu du'uufi du'aa gabaasuu baayyatti. Kanaaf kuniis akkuma itti fufetti tahee garuu dameeleen biraa baayyeen itti biqiluu qaban. Akkuma muka damee baayyatu carraan aduun jalatti si gubuu hin jirretti, qabsoo teenyattiis damee tooftaan wixinamte baayyifachuun carraa shirri wayyaanee nu miidhuu salphatee bu'aan nuti galmeessinu dabalaa dhufu taasisa.
Tooftaan damee qabsoo ittii magarsinu keessaa tokko dinagdee wayyaanee laamsheessuu yoo tahu tooftaa qabsoo amma taasisaa jirru madditti mala ittiin diinagdee wayyaanee gaggabsuuf humna jabaafi bu'a qabeessa tahetti dhimma bahaa deemuun gaariidha. Tooftaan diingdee wayyaanee itti okkolchiisuun danda'amu keessaa tokko loogii bittaa gurgurtaa meeshaalee gabaa, galii mootummaan wayyaanee funaannatu kan akka gibiraa, ashuura, qaraxaafi kkf kafaluu diduu, bitii gurgura oomishaa qotee bulaan keenya yeroof gabaa baasee gurguruu dhaabuu, baankiilee, tajaajilootaa fi dhimmoota diinagdee wayyaanee waliin hidhata qaban mara itti fayyadamuufi bitachuu lagachuun tooftaa qabsoo keessaa tokko.
Miidiyaaleen Oromootiis seenaalee kaleessaa dhiheessuufi qophiilee mirqaansituu amma hojjachaa jiru madditti sagantaa hubannaa hawaasaa wal fakkaataa guutuu Oromoo biratti uumuu danda'uu irrattiis hojjachuu qaba. Miidiyaalee walabaa dhabuun keenya ammaan dura hangam akka nu miidhee ture hubannee, amma immoo miidiyaalee kanneen qabnutti sirnaan dhimma bahuu danda'uu nurra jiraata. Du'aa gabaasuu irraa gara sagantaa tooftaa itti ajjeessanii du'an tilmaamuufi hubannaa uumu danda'u irratti daran cimee hojjachuu qaba.
Ummanni Oromoo sochii dabre irraa muuxannoo guddaa fudhachuun gamtummaafi quuqama barana argamsiise kana ammallee daran dagaagfachuu qaba. Wal dhageettii fi wal hubachuun 'haayaa toleen' wal jala hiriiruu qaba. Akkasumaas yeroo biraa caalaa ijaarsi ummataa cimee warraaqsi humna wayyaaneetii ol tahee isaan ukkaamsuu danda'u ijaaramee ka'uun qabsoon finiinuu qaba. Kana godhuuf immoo jaarmayaalee hawaasaa sabni Oromoo aadaan qabu kan akka afooshaa, iddirii, wal gargaarsaafi kkf gara warraaqsa keenyaa galchuu. Warreen hawaasa keessatti dhageettiifi fudhatama qaban sochii kana keessatti hirmaachisuun hojii odeeffannoo waliif dabarsuu irratti akka hojjatan taasisuu dha. Iddoolee carraa namoonni itti walitti qabamuu qaban kan gaddaaf gammachuu keessattiis haasawni, mariifi ajandaan keenya dhimma warraaqsa qabsoo oromoo irratti kan xiyyeeffate tahuu qaba. Tooftaan kuniis hubannoo wal fakkaataa uumuufi humna dabalachuuf gargaara.
Dhaabboonni qabsoo Oromoo kijiba dhiisanii, aangoo qabsoof osoo hin ta'in ittiin wal diiguufi wal irratti bobba'uu qofaaf fayyadamaa jiran tanaas dabarsanii dhalootaaf laachuun, akkasuma ammaas humnoota hidhate yoo kan qabaatan tahe saffisaan hojitti galchuun tumsa warraaqsa hawaasaa akka tahan godhuu. Bakka diinni hin jirre dirree adii keessa rasaasa gama tokkoo qofaa dhukaasaa wayyaanee 8 hojii ala goone jechuu dhiisanii qabatamaan ummata keessa galanii, dargaggoota qeerroo danuu biyyarraas faca'aa jiran kana tooftaa ittiin qabsotti galchuus saffisaan uumuun gaggaba kanarraa beeyfachuu qaban.
Kanneen armaan olii dabalatee tooftaaleen biraas kan namoonni qareeyyiin tilmaamuu danda'aniifi hojiirra oolmaan isiis salphaa tahan baayyeetu jira. Gurra qalbiin qaa'uun wal dhageeffachuun gaariidha. Waan dhihaatu maraas osoo hin taane tan sirrii, tan warraaqsa keenyaaf dagalee taatu keessaa fudhachuun itti hojjachuu, tan dogoggoraa sirreessaa, adeemsa qabsoo haareyaas kalaqaa deemuun gaariidha. Hayyoota keenya kan qabsoo Oromoo irraa dheeysanii moggaa ta'an ofitti dhiheessuun akeekoota haarawa akka burqisiisan taasisuuniis tumsa qabsoo tanaati. Sabni Oromoo hundi ibidda diina laboobu akka tahan godhuun barbaachisaa dha. Walumaagalatti qabsoo teenya amma itti jirru tan du'uufi du'aa gabaasuu irratti maraammartoo dhawachaa jirtu tana irraa gara qabsoo ajjeessanii du'uutti cehuu qabnaan dhaamsa kooti.
"Amni qabsoo amma jalqabne kun goolabni isii galma bilisummaati!"
Posted by Hasan Ismail at 8:41 PM